Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka Hindiya » Warshadaha Dalxiiska iyo Dalxiiska ee Hindiya oo burburay
Maamulaha guud ee Le Passage to India, Amit Prasad, waa hogaamiye aad loo qadariyo oo leh khibrad 40 sano ah oo ku saabsan safarada iyo dalxiiska.
Waxbadan kama qabaneyso Dowlada India dib usoo nooleynta safarada iyo dalxiiska dalka.
Marka laga eego aragtida xirfadle khibrad leh, warshadu waxay qarka u saaran tahay inay burburto.
Kuwa wali awooda inay ku noolaadaan warshadaha waa inay u ogolaadaan shaqaalaha inay yareeyaan oo ay jaraan mushaharka si ay u sii socdaan.
Maanta, inkasta oo 4 sano oo ganacsi ah uu guuleystay, wuxuu sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo laga walwalo mustaqbalka safarka iyo dalxiiska.
Hadal jilicsan oo hadal leh, Prasad wuxuu ka qoomameynayaa in aan wax badan laga qaban soo nooleynta warshadaha, oo shaqo siiya malaayiin qof oo dalka ku nool. Ma ahan mid ereyada si maldahan u qora, Amit wuxuu sheegay in warshadaha dalxiiska ay qarka u saaran yihiin inay burburaan. Prasad wuxuu yiri:
“Xukuumaddu waxay sii wadaa inay noqoto daawade caan ah oo aan lahayn qorshayaal iyo siyaasado ay ku soo nooleyso [dalxiis]. Ma hubo in doorka [Wasaaradda] Dalxiiska ay ugu adeegayso xaaladdan. Ma jiraan doodo wax ku ool ah, qorshayaal, ololeyaal ku saabsan soo nooleynta iyo muuqaalka Hindiya.
“Si lama filaan ah diiraddu waxay u taagan tahay oo kaliya dalxiiska gudaha… iyadoo aan la ogeyn qiimaha iyo sarifka lacagaha qalaad ee macaamiisha shisheeye ay keenaan. Waxay ahayd inaan dhinno shaqaalaheena oo aan dhimo kharashyada / mushaaraadka. Iska daa wixii taageero ah, xitaa ma jirto wax cad oo ka socda dowladda haddii iyo goorta la bixinayo qoraallada la xaqiijiyay ee 18/19. Tani waxay abuurtay dhibaato weyn oo lacag-socod ah.
In ka badan afartan sano oo aan ku dhexjiray warshada, weligay ma dareemin ciirsi la’aan. Waxaan dareemayaa xoogsatada da'da yar ee shaqadooda gabay ama [maareeya] inay ku noolaadaan mushahar dhimis. Dawladdu waxay sii wadaa inay tan u aragto inay tahay warshad caan ah, iyada oo aan garanaynin nooca fursadaha shaqo ee ay siisay qaybo ka mid ah dadweynaha, laga bilaabo shaqaalaha hudheelada illaa hagayaasha, darawalada iyo farsamayaqaannada ku baahsan Hindiya.
Waxaan hubaa inay ugu dambeyn wax walba rog rogi doonaan. Ma hubo inta shirkadood ee socdaalku ka badbaadi doonaan inay arkaan maalintaas. ”
Faallooyinkaani waa calaamad hubaal ah oo niyad jab ah oo ka timid xirfadle sare oo door muhiim ah ka soo qaatay hay'ado kala duwan oo dalka ka tirsan. Darnaanta xaalada ay ugu wacan tahay saameynta COVID-19, Dowladda Hindiya waa inay soo dhex gasho si ay nolosha ugu soo celiso safarkii iyo dalxiiskii.